Home » Author Archives: mo ma	Author Archives: mo ma	WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood), waxaa qoray:Dr.Xuseen Sheekh Axmed (kaddare)
mo ma 04/05/2017	278 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa. WAASUGE IYO WARSAME (Socdaalkii 30ka Maalmood) Qeybta 24-aad Run ahaantii, sababaha dhibaatooyinkaa dhaliyey waxay naga soo galeen xagga Reer magaalka, mana ahan kuwo loo garaabi karo, waxaana sideedaba ay ...
mo ma 29/04/2017	205 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa. WAASUGE IYO WARSAME (Socdaalkii 30ka Maalmood) Qeybta 23-aad Intaas ka dib wuxuu Waasuge Raggii usoo jeediyey su’aalo ka sameysan tusaalooyin ku saabsan dhibaatooyinka qabyaaladdu horumarinta nolosha umadda, ...
WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood), waxaa qoray: Dr. Xuseen Sh.Axmed (Kaddare)
mo ma 22/04/2017	235 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa. WAASUGE IYO WARSAME (Socdaalkii 30ka Maalmood) Qeybta 22-aad Waxaa kaloo aan maankeyga marna ka ...
Xog faah-faahsan oo ku saabsan heshiiska Dhismaha ciidamada ee dowladda federaalka iyo maamulgobaleedyada
mo ma 19/04/2017	401 Views Dowladda Federaalka ah ee soomaaliya iyo dowlad-goboleedyada xubnaha ka ah ayaa isla meel dhigay qaab-dhismeedka Ciidanka Xoogga dalka soomaaliya iyo kan Booliska. Shir ay Hoggaamiyeyaasha Dowladda dhexe iyo kuwa goboladu ku yeesheen magaalada Muqdisho intii u dhaxeysay 15- kiii laa iyo 16 kii bishan April ayey isla garteen in tirada Ciidanka Xoogga dalku noqdo 18,000 kun oo isugu jira Dhulka, ...
mo ma 18/04/2017	257 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa. WAASUGE IYO WARSAME (Socdaalkii 30ka Maalmood) Qeybta 21-aad Warsame markuu gabaygan ...
WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood), waxaa qoray.Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)
mo ma 14/04/2017	364 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa. WAASUGE IYO WARSAME (Socdaalkii 30ka Maalmood) Qeybta 20-aad Waa rag ku caan baxay aftahannimo, waaya aragnimana u dheertahay. Iyadoo la bulaamayo oo reer magaalkii madaxa isu ...
WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood), waxaa qoray. Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)
mo ma 13/04/2017	231 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa. WAASUGE IYO WARSAME (Socdaalkii 30ka Maalmood) Qeybta 18-aad Odaygii reer magaalka oo nagtigiisu isku wada inuu wax weyn ka yaqaan dhaqanka Soomaaliyeed ayaa hadalkii mar kale qaatay oo yiri ...
mo ma 12/04/2017	260 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa. WAASUGE IYO WARSAME (Socdaalkii 30ka Maalmood) Qeybta 18-aad Waasuge iyo Warsame kama ...
WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood), waxaa qoray: Dr.Xuseen Sh. Axmed (kaddare)
mo ma 08/04/2017	297 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa. WAASUGE IYO WARSAME (Socdaalkii 30ka Maalmood) Qeybta 17-aad Intii aan ...
mo ma 05/04/2017	315 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa. WAASUGE IYO WARSAME (Socdaalkii 30ka Maalmood) Qeybta 16-aad Waasuge wuu arkayaa waxaas ...
Page 1 of 712345	»	...Last »	Adver